Hemorrhoids - kuba inkinga kubuhlungu ngempela futhi ebucayi kakhulu, okuyinto abaningi babengeke babe ufuna nazo. Abantu bakhetha ukungakhulumi ngakho noma ukusho, kodwa ukuze kungabikho muntu wezwa. Esikhathini sethu, lokhu sifo sivame kakhulu futhi cishe ezivamile. Yilesi, ngeshwa, futhi omama abakhulelwe. Futhi lokhu kufanele ngandlela-thile ukulwa, kodwa kanjani? Ukuze wenze lokhu, kukhona amakhandlela hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuvela lesi sifo kwabesifazane abakhulelwe kuncike eminyakeni yobudala nasesigabeni bangaki ukubeletha beye bahlupheka kakade. Ngezinye engamashumi amabili omama esizayo elinde ingane yabo yokuqala, kungenzeka athole ngaphansi ogulayo kathathu kunaleyo walabo besifazane abakhululekile phezu amathathu asebavele izingane.
Hemorrhoids - iyisifo ukuthi uma awukwazi ukuchaza, kodwa kabi le ingemuva kufanele waziswe. Ngakho uma uzizwa uphelelwa yimuphi kabi esiswini, nje ubheke Proctologist.
Kukhona amakhandlela ezahlukene ukuthi ungakwazi elaphe hemorrhoids. Ngokwesibonelo, amakhandlela emithambo yegazi ukusiza ukuze akhulule ukuvuvukala futhi unciphise kancane ubuhlungu. Kukhona anti-inhlansi, okungase ukususa ngokuphelele nobuhlungu obubangelwa imifantu kwakheka ingquza. Kodwa amakhandlela ngesisekelo amafutha abalulekile ukusiza kahle ukuze kunqandwe ukopha. Nokho, abanye ikhandlela hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa is contraindicated.
Kukhona amakhandlela ngesisekelo zemifino amafutha, angasetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa, futhi okudambisa ubuhlungu, ukuvuvukala, futhi ukusheshisa ukuphulukiswa izicubu. Ethandwa kakhulu ngempumelelo ikhandlela hemorrhoids kwabesifazane abakhulelwe - amakhandlela equkethe uwoyela ulwandle lalesi sihlahla.
A ukulungiselela kahle "Natalsid". Ingasetshenziselwa kunoma yisiphi isigaba sokukhulelwa, ngenxa yokuthi ukuthi ukulungiselela siqukethe sodium alginate, elisuselwa ulwandle kelp. Lezi amakhandlela kuthiwa ayeke kahle ukopha, ukuphulukisa kwezicubu ukunciphisa ukuvuvukala. Kwesonto ngemuva kokuqala ukwehla kungabonakala nasemkhakheni nokuvuvukala, futhi ngemva kwamasonto amabili izibonakaliso hemorrhoids zinyamalale ngokuphelele. Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, umuthi ithambisa sezinyawo, lula unqamule izwe yabo ngokusebenzisa emathunjini akhe, futhi lokhu kunciphisa ingozi ukuthi isifo uzoqala ukuthuthukisa futhi.
Ezigabeni kamuva enkathi yokukhulelwa amakhandlela awunankinga kusukela hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa 'Relief Advance ". Lesi sidakamizwa, njengalena langaphambilini, eyeka ukopha kunciphisa ubuhlungu. Siqukethe uwoyela ushaka isibindi, okwenza lezi amakhandlela nalowo mphumela.
Bobabili mithi contraindication eyodwa kuphela - kungcono yokungezwani komzimba.
Ezimweni eziningi, hemorrhoids bayatfutfuka fast kakhulu hhayi esebenzisa isihluku ngesikhathi sokukhulelwa futhi emva kokubeletha. Kulokhu, njengoba kwaba njalo endabeni ka-sokukhulelwa, hhayi onke amakhandlela hemorrhoids lokusondela ubuhlengikazi, njengoba ingane izothola kukho konke okwenzayo.
Amakhandlela ethandwa kakhulu, angasetshenziswa namanje kukhona "Betiol", "Gepazalon", "Posterisan" nezinye lactation. Nokho, ngisho noma thina sithathe ikhandlela nephephile namanje abanye izinto eziyingozi uthole ingane ngokusebenzisa ubisi.
Indlela engcono kakhulu kulesi simo esinzima kuyoba uma wenza amakhandlela ngokwabo. Lokhu arcade kwenziwa kusukela fat noju. Ungakwazi umane usike ucezu ngesimo amakhandlela, elingenamikhono uju bese ufaka indawo abathintekayo nge hemorrhoids. Okuhle okudambisa ubuhlungu amakhandlela wenza kusuka amazambane, izaqathe kanye beet. Nokho, ngemva ukwelashwa okunjalo, lapho stop ibele, usazobona udokotela.
Kubalulekile ukwazi futhi sikhumbule njalo ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ikhandlela hemorrhoids ngesikhathi sokukhulelwa, ubungeke oyikhethile, ngaphambi kubalulekile bonana nodokotela wakho kuqala. Ngaphambi ukusebenzisa, njalo ufunde imiyalelo ngokucophelela, uzodinga ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze Izimo.